Booliska oo ka deeyrinaya is toogashada dhalinyarada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska oo dalbanayaa in laga caawiyo joojinta istoogashada dalinyarada. sawir: Johan Nilsson/TT
Booliska oo ka deeyrinaya is toogashada dhalinyarada
La daabacay torsdag 28 december 2017 kl 16.00
Heerka denbiyadda waaweeyn ee xaafadaha dan yarta ah ayaa maraya heer aan la qaadan karin, sidan waxa maqaal ku qoray gudoomiyaha booliska qaranka iyo kusimihiisa.
Mats Löving waa kusimaha gudoomiyaha booliska qaranka ayaa wargeeyska Dagens nyheter ku qoray maqaal dood ah oo uu ku soo jeediyey in ciqaabta la adkeeyo iyo in booliska amaankooda la sugo si ay shaqada ugu soo noqdaan booliskii hore uga tegay shaqooyinkooda.
Löving isaga oo u waramaya laanta warar ee raadiyaha Sweden waxa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in haayaddaha kale ee bulshada ka hortagaan in dhalinyarada ay ku biiraan kooxaha denbiyaddan faraha kula jira.
-Waxan dalbanaynaa in wax qabad cad oo mar horeba la qabto, si looga badbaadiyo wiilalshan in ay ku noolaadaan hawlaga denbiyadda ah, sidoo kalena looga joojiyo in ay la yimaadaan doonitaankooda in ay gacan ku dhiig layaal noqdaan, ayuu yidhi Löving
Ilaa hada sanadkan waxa isku dhacayadda hubeeysan ee dhalin yarada xaafadaha dan yarta ku nool u dhin tahay 40 qof. Tiradan oo aad ugu badan tirada dadkii sanaddadii hore la dilay, tusaale ahaan 2013 waxa la dilay 26 qof, halka 2014 ay tiradaas ahayd 28 qof.
Booliska ayaa sanadada soo socda ee 2018 iyo 2019 waxa loo kordhiyey dhaqaalahooda 7,1 bilyan oo karoon. Balse waxa uu sheegay Löving in ay adag tahay in ay keliyood joojiyaan denbiyaddan.
-Wax badan ayaan ka qabanaa dhalinyaradan, balse markan waxa ay gaadheen da´aha 15, 16 iyo 17, qaar badan oo ka mid ahina waaba denbiilayaal suuqan la qabsaday. Anaga waa aan sameeynaa wixi loo baahnaa si denbiga loogu xukumo, balse waa ay ka soo baxayaan jeelka iyo dhaqan celinta. Mana muuqato in doonistooda in ay sii wataan denbiyadda ay hoos u dhacday.